Mpanamboatra sy mpamatsy latabatra miasa - orinasa mpamokatra latabatra miasa any Sina
TY Tabilaon'ny fandidiana Hydraulika Manual ho an'ny efitrano fandidiana
Ny latabatra fandidiana TY manual dia mety amin'ny fandidiana ny vavony sy ny kibo, ny ENT, ny fiterahana ary ny gynecology, urology ary ny orthopedics, sns.
Ny endriny, ny tsanganana ary ny fotony dia vy vy, mora diovina ary mahazaka harafesina.
Tabilao fiasan-tsolika mekanika Hyd-TS-1 ho an'ny fandidiana ankapobeny
Ny latabatra fandidiana mekanika TS-1 dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, izay manana tanjaka mekanika avo, fanoherana ny harafesina ary fanadiovana mora foana.
Tabila fiasa amin'ny alàlan'ny fandidiana Hydraulika TS ho an'ny hopitaly
Ny latabatra fandidiana hidraulika TS dia mety amin'ny fandidiana ny vavony sy ny kibo, ny ENT, ny fiterahana ary ny aretim-behivavy, ny urôlôjika ary ny orthopedika, sns.
FD-G-2 China Electric Electric delivery latabatra fandidiana ho an'ny sampam-piterahana sy ny mpitsabo aretim-behivavy
Ny latabatra FD-G-2 be mpampiasa dia be mpampiasa amin'ny fiterahana fiterahana, ny fizahana ary ny fizahana ny aretim-behivavy.
Ny vatana, ny tsanganana ary ny fototry ny latabatra fanaterana herinaratra dia vita amin'ny vy vy 304, izay mahazaka harafesina ary mora diovina.
Tabilao fanadinana ara-pahasalamana elektrika FD-G-1 ho an'ny hopitaly
Ny latabatra fanadinana herinaratra FD-G-1 dia mampiasa fitaovana avo lenta ary tsy mahazaka harafesina, izay manatsara ny fanadiovana sy famonoana otrikaretina isan'andro ny hopitaly.
TDY-2 Tabila fiasan'ny herinaratra finday tsy misy alika ho an'ny fandidiana ankapobeny
Ny latabatra fiasan-telefaona TDY-2 dia manana fandriana vy sy volo tsy misy fangarony 304, mora diovina sy fanoherana ny loto.
Ny velaran'ny latabatra dia mizara ho faritra 5: fizarana lohany, fizarana miverina, fizarana vodiny ary fizarana tongotra roa azo esorina.
TDY-1 China Electric vidin'ny latabatra fandidiana ho an'ny hopitaly
Ny latabatra fandidiana herinaratra TDY-1 dia mampiasa rafitra fiasan-tsolika fanodinana herinaratra mba hahazoana antoka fa afaka mameno ny fanitsiana fihetsika isan-karazany mandritra ny fiasa, ao anatin'izany ny fisondrotan'ny latabatra, ny firosoana ary ny fidirana mankany aoriana, ny fitongilanana havia sy havanana, ny takelaka miverina ary ny fandikana
TDG-1 Godd Quality Multi-function Electric Operation latabatra miaraka amin'ny mari-pahaizana CE
Ny latabatra fiasan'ny herinaratra TDG-1 dia misy vondrona hetsika dimy lehibe: ny haavon'ny farafara azo alain-tahaka amin'ny alàlan'ny herinaratra, ny fidirana mandroso sy mihemotra, ny fitongilanana havia sy ny havanana, ny haavon'ny takelaka miverina ary ny frein.
TDY-Y-1 Tabilaon'ny fiasan'ny herinaratra-Hydraulika marobe any Sina
Ny latabatra fandidiana hydraulic TDY-Y-1electric dia mandray ny firafitry ny fifindran'ny herinaratra nafarana herinaratra, izay manolo ny teknolojia fandefasana lozisialy herinaratra.
Ny fanitsiana ny toerana dia mazava kokoa, ny hafainganam-pandehan'ny hetsika dia mitovy sy marin-toerana, ary ny fampisehoana azo antoka sy mateza.
TDY-G-1 Radiolucent Stainless Steel Electric-Hydraulé OR latabatra ho an'ny Neurosurgery
TDY-G-1 latabatra fandefasana elektro-hydraulic, miaraka amin'ny toerana avo lenta, indrindra mety amin'ny fandidiana ati-doha. Izy io koa dia mety amin'ny fandidiana kibo, fiterahana, fanabeazana aizana, ENT, urology, anorectal ary karazana fandidiana maro hafa.